Accueil > Gazetin'ny nosy > Soanierana Ivongo: Nihorohoro ny fitondrana Hvm
Soanierana Ivongo: Nihorohoro ny fitondrana Hvm
“Kendan’ny vomanga nasesiky ny tanany!” Izany ny kisary azo anambarana ny fihetsiky ny fitondram-panjakana ankehitriny, indrindra fa amin’ny vanim-potoana tena manetsika ny haromotam-pahefana ao amin-dry zareo ka anamparany izany sy anaovany jadona. Noho ny horohoro ao amin’ny fitondrana no mahatonga an-dreo hanao izany fihetsika hafahafa izany.
Kendan’ny vomanga nasesiky ny tanany satria raha azon’ny fitondrana Hvm atao ny tsy manome alalana ny famoriam-bahoaka eto dia ho nataony. Tany amin’ny faritr’Itasy aza moa, fampisehoana rindran-kira mba hialan’ny vahoaka voly, no noraran’ny tompomenakelin’ny fitondrana foibe Hvm sy noravana.
Tamin’iny herinandro lasa iny dia kinga aoka izany ny Depioten’Atsimondrano izay namadika ny vahoaka nifidy azy ka niofo tampoka ho Hvm, Ingahy Jaona Elite, namory vahoaka, nanao tatitra, hono. Fantatra fa iraky ny eny an-dapan’Atsimondrano ilay izy satria nahoraka loatra ilay tranga momba an’ity solombava ity, na ny resaka “fivarotam-panahy tamin’ny kolikoly” na ny hoe fitsoahany niazo ny faritra atsimon’ny nosy, noho ny akon’ny teny nataony tao amin’ny tambajotran-tserasera ara-tsosialy, na ny fihetsiny hafa.
Dia namory ny mponina tao amin’ny distrikan’Atsimondrano i Jaona Elite fa hoe “hanao tatitra momba ny asa fanaovan-dalàna teny amin’ny Antenimierampirenena”, indrindra fa ny momba ireo lalàm-pifidianana.
Ka rehefa hitam-poko, hitam-pirenena fa azon’ny depiote atao tsara ny mamory vahoaka anaovana tatitra, na tena adidiny mihitsy aza izany, araka ny voalazan’ny lalampanorenana, dia hiroso amin’izany ny solombava maro.
Omaly alahady dia nikasa hamory vahoaka tao amin’ny tranompokonolona Soanierana Ivongo ny depiote voafidy tany, i Tody Arnaud, izay avy amin’ny Mapar. Vao maraina anefa dia efa nandefasan’ny fitondram-panjakana herim-pamoretana mba hampihorohoro ny olon-tsotra teny anoloan’ny tranompokonolona.
Hay ve eto izany misy olona afaka mamory vahoaka ary misy tsy maintsy rarana na sakanana amin’ny fomba maro, indrindra fa olona tsy mitovy fomba fijery politika amin’ny mpitondra fanjakana?
Marihina tsara fa ny lalampanorenana no manipika fa “adidin’ny solombavambahoaka ny manao tatitra momba ny asa nataony amin’ny vahoaka”, ka nahoana no manao izao fihetsika mamoehitra izao ny mpitondra?
Valiny? Satria izy ireo mihorohoro noho ny fahatsapany fa efa naloam-bahoaka, ka ho tonga amin’ilay fitenenana hafahafa hoe “tsy ho faty raha tsy ianjeran-tana-tsotro”.